ए डिभिजन लिगमा म्याच फिक्सिङको गन्ध ? – Talking Sports
गौरव फुयाल, ललितपुर
मङ्गलबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आठौँ चरणमा लिगको अन्तिममा रहेको सरस्वती युवा क्लबले हिमालयन शेर्पासँग खेल्दै थियो । पछिल्लो ८ खेलमा मात्र दुई गोल गरेको सरस्वती र उपाधी दाबेदार मच्छिन्द्र क्लबलाई २–० स्तब्ध पारेको शेर्पाबीचको भिडन्त अचम्मैसँग जारी लिगकै हाइ स्कोरिङ्ग खेल भयो ।
त्यसअघि बराबरीबाट एक अंक मात्र बटुलेको सरस्वती सबैले टाउको नै कन्याउनु पर्ने गरि ४–३ को जित रच्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । लिगको शुरुवात अघि ठूला क्लबका प्रशिक्षकहरुले पनि लिगमा यो टिम बलियो र यो कमजोर भन्न मिल्दैन भनेका थिए । तर बिश्लेषक शैलीमा हेर्ने हो भने शेर्पा सरस्वतीको तुलनामा निकै बलियो टोली हो – शरिरिक, मानसिक र रणनैतिक हिसाबले ।
लिग दौरान मैदानमा निर्धारित समय मात्र गरेर ७ सय २० मिनेट बिताइसक्दा दुई गोलमात्र गरेको सरस्वतीले त्यही बलियो शेर्पालाई चार गोल ठोक्नु लिगलाई नजिकबाट नियालेका दर्शक र मिडियाले शंकाको बिषय मान्नु जायज नै छ । सरस्वतीले चार गोल गरेर मात्र होइन, शेर्पाले गोल खाएको पनि धेरैलाई नपचेको हो । खेलमा भएका सबै गोल सेट पिसमै भएका छन्, या त फल पछिको फ्रि किकमा अथवा कर्नरमा ।
पहिलो हाफमा २–२ गोलको बराबरीपछि धेरै गोल हेर्न पाइयो भनेर दङ्ग परेका दर्शकको मनमा दोश्रो हाफको अन्त्यतिर भने चिसो पस्न थाल्यो जब ८४ औँ मिनेटमा काजिम बुसारीले गोल गर्दै सरस्वतीलाई ३–२ को अग्रता दिलाए ।
बुसारीको क्रसलाई बिचमै रोक्दै शेर्पाका डिफेन्डर आशिष गुरुङ आफ्नै कर्नरतर्फ बल हान्दै डिफेण्ड गर्छन् । कर्नर बलमा बुसारी हेडिङ्ग गर्न अघि बढ्छन् र गोलरक्षक किशोर गिरीले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिदा सहजै गोल हुन्छ । गोल गरेको भन्दा भनि गोल हुन दिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
त्यसपछिका थप दुई गोल पनि कम रोचक छैनन् ।
खेलको छैठौ तथा सरस्वतीको अन्तिम गोल यू–१९ टिमका मनिष थापाले गर्दा उनी करिब ४५ यार्डमा बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन् र तिर्थ बहादुर बस्नेतलाई दिन्छन् । तिर्थ डि बक्स बाहिरै मनिषलाई पास दिन्छन् । मनिष शेर्पाका तीन डिफेन्डर र गोलरक्षक गिरीलाई बिट गर्दै डि बक्स भित्रबाट अत्यन्तै सहज गोल गर्छन् ।
मच्छिन्द्रलाई रोक्न सफल शेर्पाको रक्षापक्तिले मनिषलाई रोक्नका लागि न त अफसाइड ट्रयाप राख्यो न त मर्किङ नै ग¥यो । सबैको लागि मिलोमतोको गन्ध फैलिनु स्वभाविक नै थियो ।
अन्तिम गोलपनि छलफल गर्न योग्य नै छ । थपिएको पाँच मिनेटको इन्जुरी समयमा शेर्पाले फ्रि किक पाउने बित्तिकै एक दर्शक प्याराफिटबाटै चिच्याउछन्ः “यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट (शत प्रतिशत) गोल हुन्छ ।” शेर्पाका रवी थापा फ्रिकिका लागि जान्छन् । रविले ३५ यार्ड भन्दा टाढाबाट गरेको प्रहारले आरामसँग जाली चुम्छ । सरस्वतीका गोलरक्षक बिष्णु कुमार केसीले अप्रत्यासित रुपमा बल रोक्न गरेको सुस्त प्रयास । उनी निकै लेट डाईभ हान्छन् र बल भित्र छिरिसकेको हुन्छ ।
बिष्णुमा अनुभवको कमि हुन सक्छ । तर आठ खेलमा पोस्ट सम्हालेका प्रदिप भण्डारीको स्थानमा सरस्वतीले प्रतियोगिताको निकै महत्वपूर्ण चरणमा किन अनुभव बिहिन बिष्णुलाई खेलाउन पुग्यो ?
खेल सकिए लगतैको पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्समा दुबै टिमका प्रशिक्षकले म्याच फिक्सिङ नभएको दाबी गरे । सरस्वतीका प्रशिक्षक प्रदिप नेपालले आफ्नो टिमलाई ३ अंक आवश्यक रहेको र दिएको हौसलाका कारण राम्रो खेलेको दाबी गर्छन् । शेर्पाका प्रशिक्षक सञ्जीव बुढाथोकी मिलोमतोबारे थाहा पाउने जिम्मा मिडियाकै रहेको बताउछन् ।
दुई टिमबीचको खेल बारे लिग निर्देशक संजिब मिश्र भन्छन्: “खेलाडीको गोल गर्ने तरिका र हाउभाउले केही शंका देखिएको छ । त्यसको इन्टिग्रिटी अफिसरले अनुसन्धान गर्नेछन् । यसलाई स्पष्ट रुपमा दाबी गर्न त सकिदैन । हामी भिडियो फुटेजको आधारमा हेर्नेछौ अनी त्यसको अनुसन्धान अगाडी बढाउनेछै ।”
इन्टिग्रिटी अफिसर सुदिप आचार्यबाट घटनाको जानकारी लिन खोज्दा उनी उपस्थित हुन चाहेनन् ।
हिमालयन शेर्पा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको क्लब हो । उनी त्यहा पनि अध्यक्ष पदमै आसिन छन् । सरस्वतीका अध्यक्ष एन्फा उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली हुन् । यस्तो स्थितीमा एन्फाले खेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउला की नल्याउला कसैले भन्न सक्दैन ।
स्पष्ट के छ भने नेपाली घरेलु लिगमा म्याच फिक्सिङ्गको शंका लामै समयदेखि नै चल्दै आएको छ । यसअघि भएका लिगहरुमा पनि रेलिगेसन बच्नका लागि धेरै पटक नै फिक्सिङ्ग भएको दाबी गर्नेहरु धेरै छन् । यसमा अनुसन्धान नहुनु प्रमाणको अभाव भनिएपनि मुख्य कारण एन्फा गम्भिर नहुनु नै हो ।
एन्फाले म्याच फिक्सिङ्ग हुन नदिनका लागि इन्टिग्रिटी अफिसरको नेतृत्वमा कमिटी बनाएको त छ तर यसले आफूले अनुसन्धान गरेको र त्यसको परिणाम अहिलेसम्म पनि बाहिर निकालेको छैन ।
न नेपालको घरेलु फुटबल कसैले सोच्नै नसक्ने गरि सफा नै रहेको हो की ?
Pingback: सरस्वती कप्तान म्याच फिक्सिङ्गको आरोपमा दुई बर्ष प्रतिबन्धित – Talking Sports